Ikhaya » Iindaba zokuhamba zaseYurophu » Icandelo lezokhenketho limema abaseYurophu ukuba baphinde bavule uhambo lwabo
Icandelo lezokhenketho limema abaseYurophu ukuba baphinde bavule uhambo lwabo
'Vula iYurophu' lelona phulo liphambili lokwazisa eliya kudlala indima ebalulekileyo ekuvulweni kwakhona kwezokhenketho lwaseYurophu kunye nokuvuselela ukuzithemba kohambo kweli hlobo.
Imibutho yaseYurophu yokhenketho ebonelela ngobunkokeli obubalulekileyo bokuqinisekisa abathengi ukuba uhambo olukhuselekileyo nolungenamthungo lunokwenzeka ngehlobo lowama-2021
Imikhankaso emininzi yedijithali iya kuqhuba ukubandakanyeka kuyo yonke iYurophu ukukhuthaza imfuno yokuhamba
Iphulo eliza kuphehlelelwa njengoko uphando lwe-ETC lubonisa ukuba iimvakalelo zokuhamba eYurophu ziyafudumala
Kwangoko namhlanje, IKhomishini yoKhenketho yaseYurophu (i-ETC) thaca 'Vula iYurophu', iphulo elikhulu lokukhuthaza eliza kudlala indima ebalulekileyo ekuvulweni kwakhona kwezokhenketho lwaseYurophu kunye nokuvuselelwa kokuzithemba kohambo kweli hlobo. Phambi kokuncitshiswa okucetyiweyo kwezithintelo kulo lonke elaseYurophu kwezi veki zizayo, icandelo lezokhenketho lisebenza kunye ukukhuthaza abemi baseYurophu ukuba batyelele phesheya ngoxanduva kwaye babanike ulwazi olucacileyo nolubanzi ukuze bacwangcise uhambo lwabo olulandelayo.
Iphulo 'lokuvula iYurophu' laziswe namhlanje kwiNtlanganiso Jikelele ye-ETC e-Algarve, ebanjwe yiTurismo de Portugal. Ukukhokelwa ngumzekelo, iintloko zeebhodi zokhenketho zesizwe zaseYurophu zadibana buqu okokuqala ukusukela oko kwaqala ubhubhane ukubonisa ukulungela kweYurophu ukuqala kwakhona ukhenketho.
Eli phulo, likhokelwa yi-ETC kwaye lixhaswe ngemali yi-European Union ngenkxaso yeendawo ezingaphezulu kwe-30 kunye neempawu zokuhamba, ziya kuqaliswa kulo lonke elaseYurophu njengoko kuthintelwa izithintelo kwaye amazwe avulekele ukuhamba. I-UK ne-Jamani ziimarike zokuqala apho eli phulo liza kuphehlelela ukusukela phakathi kuJuni. 'Vula iYurophu' iya kuqhubeka isebenza kulo lonke ihlobo kwaye kulindeleke ukuba ifikelele kwizigidi ezingama-26 zabahambi kwiYurophu iphela.
Eli phulo ledijithali yamajelo amaninzi lenzelwe ukuqhuba ukubandakanyeka kwi-Intanethi kunye nokuqinisekisa abakhenkethi abanokubakho ukuba iindawo zokufikela kunye namashishini ezokhenketho eYurophu aziphumezile zonke iinkqubo ezifanelekileyo zempilo nezococeko kwaye zivulelekile kubatyeleli. Njengengxenye yephulo, i-ETC kunye namaqabane baye bavelisa i-microsite OpenUpToEurope.eu eya kuba yindawo yokumisa enye kwabo bajonga izicwangciso zabo zokuhamba ngehlobo le-2021. Iya kubandakanya lonke uhlaziyo lwamva nje kunye nolwazi malunga namava okuhamba anokuthi abathengi Yonwabela iYurophu ehlotyeni, kugxilwe kwindalo, inkcubeko kunye namava esisu. I-microsite iya kubonelela ngeengcebiso ezifanelekileyo kunye neengcebiso malunga nendlela yokuhamba eYurophu, kubandakanya ulwazi olubalulekileyo malunga neSitifiketi se-EUV se-COVID kunye ne-European Tourism Covid-19 Seal Safety.
Ethetha kwinkomfa yoonondaba ebikhankanywe ngaphambili namhlanje, uMongameli we-ETC kunye neTurismo de Portugal, u-Luís Araújo uthe: “Olu lusuku olubaluleke ngokwenene kwezokhenketho lwase-Europe, lubonelela ngethemba kwinto esinethemba lokuba iyakuba lihlobo elinika umdla kwiindawo ezizayo zase-Europe. I-ETC kunye namazwi ahamba phambili kukhenketho lwaseYurophu namhlanje avakalisa ukuba iYurophu iyavula. Iindawo zokufikela zaseYurophu, ezokuhamba kunye nezamashishini okhenketho zikulungele ukubonelela ngamava agudileyo, ahambelanayo kubahambi ekudala alahlekile. Eli phulo liza kubandakanya lonke ulwazi olufunwa ngabakhenkethi kwaye baludinge nanjengoko becwangcisa uhambo lwasehlotyeni, nanjengoko sisebenza kunye ukukhuthaza ukhenketho olunoxanduva noluzinzileyo. ”
Ukuphehlelelwa kweli phulo lixesha elifanelekileyo, kuza emva kophando lwamva nje oluvela kwi-ETC lubonisa ukuba uninzi lwabantu baseYurophu banethemba lokubaleka ehlotyeni, uninzi (56%) luceba iholide ukuphela kuka-Agasti ka-2021. Kubo, ngama-49% bakulungele ukuya kwelinye ilizwe laseYurophu, benika ithemba kwiindawo ezininzi zaseYurophu.
Phakathi kwabahambi beentaka zakuqala, i-9 kwabali-10 sele inemihla ethile ecwangcisiweyo yeholide zabo, uninzi lwazo lwenziwa uvavanyo lokuhamba ngoJulayi nango-Agasti (46%).